China Urea Phosphate UP orinasa sy mpamatsy | Lemandou
Votoatiny% ≥ 98,0
Phosphore (toy ny P2O5)% ≥ 44,0
Nitrogen (toy ny N)% ≥ 17,0
Mamandoana% ≤ 0,2
Rano tsy voavaha% ≤ 0.1
1.Urea phosphate dia zezika mitambatra azota sy fôforôra tsara, ary manana chelady tsara sy fampahavitrihana ny calcium calcium sy manezioma ary manatsara ny firafitry ny tany misy alkaly. Noho izany, ny fanatsarana ny tany masiran-alkaly misy vokany tena tsara. Noho izany, ny urea phosphate dia ampiasaina ho fanondrahana mitete.
2 Fampitomboana ny vokatra: ny phosfat Urea dia afaka manararaotra ireo tombony azo fehezina amin'ny teknolojia manondraka mitete, manatsara ny fampiasana zezika, mampiroborobo ny famokarana landihazo ary manatsara ny kalitaon'ny landihazo.
3 fakany sy zana-kazo matanjaka, ravina sy voninkazo lehibe: ny azota maneziôma sy phôpôleôzan'ny urea phosphate dia afaka miasa tanteraka amin'ny dingana voalohan'ny fitomboan'ny voly mba hanomezana otrikaina be dia be hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ary hampitombo ny vokatra.
Torolàlana momba ny doka
vokatra Daty fampiharana Dosis tanteraka Dosis isaky ny zavamaniry
Hazo voankazo (hazo olon-dehibe) Hatramin'ny manomboka ny famokarana dia hatramin'ny 4 ka hatramin'ny 6 herinandro alohan'ny fijinjana 100-200 kg / ha. Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro
Tanimboaloboka (latabatra ho an'ny olon-dehibe
voaloboka) Toy ny fanombohan'ny fahavokarana / dingana voalohany amin'ny fisokafan'ny fandriana hatramin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny voninkazo 50 - 200 kg / ha. Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro
Citrus (hazo olon-dehibe) Mandritra ny tsingerin'ny voly manontolo, misy fahefana amin'ny lohataona sy tapaky ny ririnina 150 - 250 kg / ha. Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro
legioma Toy ny fambolena hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 4 herinandro alohan'ny fijinjana 100 - 200 kg / ha. Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro
ovy Avy amin'ny zezika mandra-pahatongan'ny antsasaky ny dingan'ny tuber. 100 - 200 kg / ha. Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro
voatabia Manomboka amin'ny zezika ka hatramin'ny 6 herinandro alohan'ny fijinjana 150-250 kg / ha. Miankina amin'ny toetry ny tany sy ny toetr'andro
Previous: NPK Crystal (soluble feno rano)
Manaraka: Diammonium Phosphate DAP